Gwen Stefani, Blake Shelton vanopemberera mushure meAACM Awards neapfuti, maoysters - Nhau
Kuru Style Varaidzo Blog Nhau
Gwen Stefani, Blake Shelton vanopemberera ake ACM Awards mashandiro nema shots, oysters: Mifananidzo
Gwen Stefani ndizvo Blake Shelton 's chikuru cheerleader.
John Shearer / ACMA2019 / Getty Mifananidzo ye ACM
Muimbi wepop akabatana nemunyika yemimhanzi superstar yehusiku hwakakosha husiku pa 2019 Chikoro cheNyika Mumhanzi Mipiro musi waApril 7 uye vakanyora dzimwe dzenguva yavo inotapira uye yekupemberera kubva pakubuda pa Instagram uye yake Instagram Nyaya
'Saka ndinodada kuva iri zuva rakanaka remunhu kumakambani eACM manheru ano @blakeshelton #godscountry # 2019 gx,' akadaro mumwe mufananidzo yeavo pamwe chete, apo vachinyora a slideshow izvo zvakavaratidza kukombama pasati pashoo, '#thankuGOD 4 @blakeshelton gx.'
Chinyorwa chakagovaniswa na Gwen Stefani (@gwenstefani) pana Apr 8, 2019 pa2: 02 am PDT
Kunyangwe Gwen ari nyeredzi yeLas Vegas - ane kugara, 'Gwen Stefani: Ingori Musikana,' kuZappos Theatre kuPlanet Hollywood Las Vegas Resort neCasino - anga ari muSin City kuMGM Grand Garden Arena pa ACM Awards husiku hwaBlake uye chete Blake, akaendesa mutambo unotyisa, unomutsa weumwe wake nyowani 'Nyika yaMwari,' iyo yaifungidzirwa zvakanyanya seimwe yeakanakisa pane ese show.
' Blake Shelton chaizvo akachekwa… akachekwa, 'Gwen - anga achifambidzana naBlake kweanopfuura makore matatu nehafu - akadaro pa Instagram Nyaya yake asati amhanyisa kumashure. 'Ngatitaurei nezvekucheka izvo zvakangoitwa na Blake Shelton , vakomana. ' (Mumwe fan akamutora mazhinji Instagram Nhau dzeposta pano .)
@gwenstefani on Instagram Story • • • #gwenstefani #gx #instagramstory #igstory #instagram #social #hollabackgirl #justagirl #justagirlvegas #shefani #acmawards # acmawards2019
Chinyorwa chakagovaniswa na . (@thequeenofawesome_gx) pana Apr 8, 2019 pa6: 36 am PDT
Gwen akagovana mavhidhiyo ake paakapinda mutrailer raBlake ndokusvika kumuimbi nemaneja wake, Brandon Blackstock (murume waKelly Clarkson), mushure mekuita kwake. Zvakanaka, ihwohwo hwaive hupengo. Handifunge kuti zvingave zvirinani pane izvo, 'akavaudza nezvekuita kwaBlake.
Gwen akazvinyorawo, Blake, Brandon nevamwe vachipfura kubva mumakapu matsvuku eSolo mukaravhani yaBlake, ndokuzoratidza kuti vaive nemabiko ekupemberera kwavakaisa mundiro yemazai mbishi mushure mekuratidzwa.
Gwen akagovanawo mifananidzo yake inoshamisa sirivheri yakashongedzwa Azzaro minidress, achichema kuti vafotori havana kuwana yakazara-yakazara pikicha yesirivheri inopenya - saka akagovana mifananidzo mishoma kubva kwaari kukodzera na stylist Rob Zangardi kuti vateveri vaone kutaridzika kwese . Iye akatumirawo mapfuti akati wandei nemapikicha iye nemukomana wake vachitsvodana uye vachimbundirana.
Mukadzi wepamberi weNo No Doubt akaburitsa pachena kuti akadzokera kuLos Angeles pakati pehusiku nemuridzi webvudzi ane mukurumbira Danilo, uyo akange amupa izvo zvaakadana kuti 'Bvudzi raBarbie kwezuva rehusiku.'
'Iyi ndiyo yedu mushure - takanyanya-kumuka, kuguma kwehusiku, Blake aishamisa uye hatina kuneta uye ndine izvi: mwana Nutter Butter,' akadaro achiseka, achiratidza zvaaizowana akauya pamwe mushure mekunge iye naDanilo vapamba ndege yekudyira ndege.
Whitney Cummings anoti 'haachabatikane'
'Haugone Kumirira' nyeredzi Ethan Embry anovhura nezve yapfuura kupindwa muropa nezvinodhaka
khloe kardashian mutsva webvudzi
ratings yekurarama nekelly uye ryan
epamusoro vana mabhaisikopo ema90s
ndiye da brat ngochani